Ahoana ny fanadiovana ny sofin'ny alika: izay ilainao rehetra | Tontolo alika
Ny fananana alika dia midika andraikitra satria tsy ny mankafy ny tsara fotsiny, fa ny mikarakara ny filan'ny biby fiompinao koa. Asa toy ny fandroana azy, mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby na mahafantatra ny fomba fanadiovana sofina alika tena zava-dehibe izy ireo satria afaka misoroka olana ara-pahasalamana.
Noho izany antony izany dia te hanampy anao hahafantatra ny fomba fanadiovana sofina alika izahay. Eto ianao dia hahita torolàlana feno hanatanterahana an'io fikarakarana isan-kerinandro io. Handeha hiasa ve isika?
1 Maninona ianao no tokony hijery ny sofin'ny alikao?
2 Ahoana ny fomba fanadiovana sofina alika
2.1 Singa ilaina
2.2 Ny fahadiovan'ny fanadiovana ny sofina
2.3 Dingana fanadiovana ny sofin'ilay alika
3 Ahoana ny fomba hisorohana ny olana amin'ny sofina amin'ny alika
4 Fambara famantarana fa voan'ny otitis ny alikanao
Maninona ianao no tokony hijery ny sofin'ny alikao?
Raha tsy fantatrao, ny sofin'ny alika dia iray amin'ireo faritra mora tohina amin'ireo biby ireo. Ary izany no mahatonga azy ireo ho toerana mety hidiran'ny aretina. Raha tsy mikarakara azy ireo ianao dia mety hijaly amin'ny otitis miverimberina, olana amin'ny fihainoana, fahaverezan'ny fihainoana, na koa ratsy kokoa aza, satria mety hiparitaka amin'ny faritra hafa amin'ny vatanao ilay aretina.
Ny fizahana tsindraindray, ary koa ny fanadiovana, dia tena zava-dehibe ary tsy maintsy atao atao im-betsaka isam-bolana mba hijerena hoe mety ihany. Aza adino fa ny alika dia tsy afaka manadio ny sofiny samirery, fa mila ny fanampian'ny tompony izy ireo.
Amin'ny fikarakarana ny sofin'ny alikanao dia tsy hihazona azy io ho madio fotsiny ianao fa tsy hisoroka olana ara-pahasalamana, na mila manatona mpitsabo mpanampy.
Manaraka izany dia tianay ny hamela anao ho mpitari-dalana mahasoa amin'ny zavatra rehetra tsy maintsy raisinao momba ny fanadiovana ny sofin'ny alika, manomboka amin'ireo singa izay ilainao hatramin'ny dingana tokony hataonao hanaovana izany. Mazava ho azy, tadidio fa raha mahatsikaritra zavatra hafahafa ianao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny manatona ny mpitsabo anao alohan'ny hiharatsy ny olana.
Hanomboka amin'ny filazanay aminao ireo singa ilaina rehetra hanadio ny sofin'ny alika. Tsy sarotra ny mahita ireo ary ny zavatra azo antoka indrindra dia ny fanananao azy ireo ao an-tranonao.
Manokana, miresaka izahay:
Madio ho an'ny alika. Hita izany any amin'ireo magazain'ny biby fiompy, fa any amin'ny toeram-pitsaboana izay alehanao matetika koa.
Raha lehibe ny alikanao, na manana alika tsy milamina ianao izay tsy diovina mora foana, dia ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny manao an'io Asao eo anelanelan'ny olona roa ny iray hihazonana azy io raha ny iray kosa mitantana sy manadio ny sofina.
Farany, mety te hanana fitsaboana vitsivitsy ianao rehefa avy nanadio ny sofin'ny alika ho fitsaboana. Amin'izany fomba izany no hahafantaranao rehefa mandeha ny fotoana fa, raha mamela ny tenanao hatao ianao, dia hahazo zavatra tianao be dia be avy eo. Mazava ho azy, aza adino fa ny fikolokoloana na ny fandaniana fotoana miaraka aminy dia mety ho valisoa lehibe ihany koa.
Ny fahadiovan'ny fanadiovana ny sofina
Ny iray amin'ireo angona tena ilaina tokony ho fantatrao rehefa manadio ny sofin'ny alika dia ny fahita matetika. Izany hoe isaky ny inona no tsy maintsy diovinao mba ho salama izy ireo. Ary amin'ity tranga ity dia tsy mora araka ny noeritreretinao ny valiny satria miankina amin'ny karazana alika anananao izany.
Araka ny fantatrao, misy karazany maro ny alika, ary samy manana ny mampiavaka azy ny tsirairay. Amin'ity tranga ity, ny tokony ho ao an-tsainao dia hoe, alika manan-tsofina lava (ireo manarona ny lalan'ny sofina) mora voan'ny aretin-tsofina.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny alika manana sofina lava sy floppy dia mila fanadiovana matetika kokoa noho ireo izay manan-tsofina fohy sy ambony.
Ary impiry no manadio? Avy eo:
Raha alika manan-tsofina fohy sy maranitra izy ireo: 1-2 isam-bolana.
Raha alika manan-tsofina lava sy milentika izy ireo: 1-2 isan-kerinandro.
Miankina amin'ny fomba fiainan'ny alika, io refesina io dia mety miovaova, fa ny fanadiovana tsy tapaka dia zava-dehibe mba hisorohana ireo olana lehibe eo amin'ny lakandranon-tsofina, indrindra raha kely ny fikorianan'ny rivotra na hamandoana na potipoti-javatra.
Dingana fanadiovana ny sofin'ilay alika
Efa nanadio ny sofin'ny alikao ve ianao? Ny idealy dia izay ataovy satria alika kely io, mba ho zatra mamela ny tenanao ho vita. Tokony hanomboka amin'ny fitondrana azy any amin'ny toerana ahitany fahafaham-po ianao. Raha hitanao fa mitebiteby izy dia mety ilaina ny manana olona manampy anao mitazona azy eo am-pandinihanao sy diovinao ny sofinao.
Raiso ny sofina ary tazomy eo anelanelan'ny ankihiben-tànanao sy ny rantsan-tànanao. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mijery tsara ao anaty sofina ary mijery raha misy tsiambaratelo, fofona ratsy na mena. Raha mahatsikaritra ny iray amin'ireto zavatra ireto ianao, anisan'izany ny savoka be dia be, tsara kokoa ny manatona dokotera mba hahazoana antoka fa tsy misy olana matotra kokoa.
Ny dingana manaraka tokony hataonao dia ny manadio moramora ny sofina amin'ny baolina landihazo mando. Azonao atao ny mampiasa serum hanadiovana azy tsara. Mazava ho azy, miezaha tsy hametraka be loatra ny landihazo satria tsy hahafinaritra azy ireo izany. Avy eo, atsofohy ny tendron'ilay mpanadio alika ary ampio ny ranoka sasany. Sasao tsara mba hamakivakiana ny lakandran-tsofina ary hamaha ny sofina.
Ny zavatra mahazatra dia ny alika mihozongozona ny tenany, fa aorian'io dia manandrana misambotra indray ny sofina toy ny tamin'ny voalohany ary manala ny tafahoatra amin'ny landy mando sy madio hafa.
Izany dia tsy maintsy hatao amin'ny sofina hafa koa.
Ahoana ny fomba hisorohana ny olana amin'ny sofina amin'ny alika
Ankoatry ny fanadiovana dia zava-dehibe ny fisorohana ny toe-javatra sasany izay mety hampiroborobo ny fisehoan'ny aretin'ny sofina. Ohatra, ny hamandoana, na rehefa mandro na raha lena (avy amin'ny orana) satria mety hiteraka bakteria maniry eo amin'ny sofina izany.
Teboka iray hafa tokony horaisina dia ny vatana hafahafa, izay hiteraka fahasosorana. Miresaka momba ny vovoka isika, ny zavamaniry miraikitra ary manosotra ny sofinao (na miraikitra aminy), sns.
Ny volo, satria misy karazana alika sasany manana azy lava kokoa, ary tapaka matetika izy io, saingy raha ny tena izy dia tsy io no tsara indrindra satria io volo io dia misakana ny vatan'ny vahiny, ny hamandoana ...
Fambara famantarana fa voan'ny otitis ny alikanao
Ary ahoana no ahalalanao raha manana olana amin'ny fandrenesana ny alikanao? ny otitis dia matetika, indrindra amin'ny fahavaratra, izay rehefa mando indrindra isika. Noho izany, ny fahalalana izay soritr'aretina mety hahatonga anao mailo dia afaka manampy anao hanao zavatra alohan'ny hiharatsy azy.
Anisan'ireo fanamarihana azontsika ireo:
Avelao hihozongozona ny alikao mihoatra ny mahazatra.
Avelao izy hikotrika na hikosehana.
Raha eo an-daniny ny lohan'ny alikao.
Manalavitra ny fifandraisana amin'ny sofina izany.
Tsiambaratelo sy fofona ratsy.
Raha mahatsikaritra maromaro ianao amin'ireo soritr'aretina ireo ary na eo aza ny fanadiovany ny sofiny, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby mba hanamarina azy.
Manana fanontaniana momba ny fanadiovana sofina alika ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ahoana ny fomba fanadiovana sofina alika